Madaxweynaha Puntland & wafdi uu hoggaaminaayo oo gaaray Boosaaso | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Puntland & wafdi uu hoggaaminaayo oo gaaray Boosaaso
Madaxweynaha Puntland & wafdi uu hoggaaminaayo oo gaaray Boosaaso
Madaxxweyna Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay Deegaanada Puntlad kadib gudashada Rukniga diiniga ah ee Xajka.
Wafdigaasi oo kaso dagay Garoonka magaalada Boosaaso ee Xaruunta Gobolka Bari ayaa waxaa kusoo dhoweeyey , masuuliyiin ka tirsan goleyaasha Puntland, maamulka gobolka, kan degmada, saraakiisha ciidamada ,kuwa Madaxtooyada, aqoon yahano iyo xubno kale.
Madaxweynaah Maamulka Puntland ayaa ugu horayn ka warbixiyey socdaalkiisii dalka sucuudiga iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo uu soo maray, wuxuuna caddeeyay in isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo ay dalka Sucuudiga u tageen gudashada waajibaadka Xajka.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in socdaalka dalka Imaaraadka ay la xiriirtay arrimo ku saabsan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ay u baahan yihiin Maamulka Puntland.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kula dardaarmay shacabka iyo masuuliyiinta Maamulka inay Illaashadaan nabadda, xasiloonida, horumarka, kala danbaynta iyo midnimadooda.
Previous articleJowhar oo lagu wado in berri lagu qabto doorashada Madaxweynaha Hir-shabeelle
Next articleMareykanka oo Dowladda Soomaaliya ku amaanay horumarka laga gaaray hanaanka Dimoqraadiyada